Costa Rica, paradaịs nkịtị iji chọpụta | Akụkọ Njem
Costa Rica, paradaịs nkịtị iji chọpụta
Costa Rica bụ Latin America paradise nke ecotourism na mpụga njem. Otu puku na narị abụọ na iri itoolu kilomita nke ụsọ oké osimiri, ọdọ mmiri mgbawa, osimiri ọcha, ihe omimi tupu oge ndị Hispanic, oke ohia jupụtara na alụlụ na ókèala nke ọkara nde mmadụ nke ụwa. Anyị gafere Costa Rica site na Pacific gaa Caribbean, n'agbata ugwu mgbawa, ebili mmiri na mbe.
1 Costa Rica, ebe kachasị elu maka ndị surfers
2 Ogige Tortuguero ma ọ bụ «obere Amazon»
3 Costa Rica, ala ugwu na-agbọpụ ọkụ
4 Ọtụtụ puku ihe egwuregwu na ọtụtụ adrenaline na Costa Rica
5 Ihe omimi nke pre-Hispanic nke Costa Rica
6 Mara San José
7 Ogige Ugwu La Amistad
Costa Rica, ebe kachasị elu maka ndị surfers
Na kilomita nke aja aja ọcha na oke ebili mmiri, Costa Rica abụrụla otu n'ime ebe kachasị amasị ndị surfers ịme egwuregwu a. A sị ka e kwuwe, a na-ahụta obodo ahụ dị ka ebe nke atọ kachasị ewu ewu maka sọfụfụ mgbe Hawaii na Indonesia maka oke osimiri na ebili mmiri ya, ihu igwe dị mma, mmiri ọkụ, ọnụ ahịa ezi uche na ndị enyi.
Ndị ọkachamara na-ekwu na ụfọdụ n'ime ebili mmiri kachasị mma n'ụwa dị n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ. Enwere ezigbo ndị na-agbaji maka novices na ọtụtụ ebili mmiri ị ga-agba ịnyịnya, gụnyere nke abụọ kachasị ogologo na ụwa na Pavones.
A maara dị ka paradaịs na-efegharị mmiri, Pavones bụ obere obodo dị n'akụkụ ndịda ụsọ mmiri nke Costa Rican Pacific. Oge kacha mma iji gaa na sọfụ bụ n’oge udu mmiri, nke na-amalite site n’April ruo Nọvemba.
Costa Rica bụ otu n’ime mba ole na ole oké osimiri abụọ nọ naanị awa isii. otu na ibe ya. Nke a na - eme ka o kwe omume igwu mmiri na Pacific mgbe ọwụwa anyanwụ wee kwụsị ụbọchị ahụ na - eme ka ebili mmiri nke Atlantic na - ada mgbe anyanwụ dara - obi abụọ adịghị ya na paradaịs zuru oke maka ndị na-eri mmiri!
Ogige Tortuguero ma ọ bụ «obere Amazon»
Mgbe anyị rutere n'ụsọ oké osimiri ebe ọwụwa anyanwụ, nke ndị Caribbean na-asa ahụ, anyị hụrụ otu n'ime Ogige ntụrụndụ mba nke Costa Rica: Tortuguero. A maara dị ka 'obere Amazon' nke a bụ isi ihe na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na otu n'ime akụkụ kachasị iru mmiri nke mba ahụ. Nest nke nduru n’akụkụ osimiri bụ isi ihe kpatara ọtụtụ ji aga Tortuguero. Agbanyeghị, enwe, agụ na iguanas na-acha akwụkwọ ndụ, agụ iyi, nnụnụ dị ebube na nnukwu tarpọn na manatees bi na ogige a. Na mgbakwunye, azụ gaspar na-ebi na mmiri ya, nke a na-ewere dị ka onye ikpeazụ dịka fosil dị ndụ n'ihi ọdịdị ya.
Emepụtara ọwa mmiri Tortuguero a ma ama na 70s iji jikọta ọtụtụ ọdọ mmiri na osimiri, na-eduga na njem osimiri n'etiti Limón na obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri. Mmiri ọdọ mmiri, apịtị na oke ọhịa jupụtara na mmiri bụ akụkụ nke ebe dịgasị iche iche nke ogige a.
Ọ bụrụ na enwere ebe obi ụtọ na-anabata ọbịa, ọ bụ Tortuguero. Ma ebe a abụghị naanị ahịhịa ndụ. N'ịbụ onye nọ na Caribbean, ọ bụ otu n'ime ógbè kachasị ukwuu nke ọdịbendị Afro-Caribbean na mba ahụ. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị bi na ya sitere na Jamaica ma na-edebe ọdịnala ya, nke mere Tortuguero bụ ebe na-adọrọ mmasị iji mata site na echiche ọdịbendị na ecotourism.
Costa Rica, ala ugwu na-agbọpụ ọkụ
Dị ka akụkụ nke Pacific Ring of Fire, Ugwu ugwu Costa Rica so n’ime ihe ịtụnanya n’ụwa. N'agbanyeghị na ọ bụghị mba sara mbara, ọnụ ọgụgụ nke ugwu mgbawa na Costa Rica ruru 112. themfọdụ n'ime ha bụ ogige ntụrụndụ mba nke na-echebe gburugburu ebe obibi mara mma.
Otu n'ime ndị a bụ ugwu Arenal, nke a na-ewere n'etiti ọkụ ọkụ 10 kachasị arụ ọrụ n'ụwa site n'aka ndị ọkà mmụta sayensị ọ bụ ezie na ọ dịghị onye ga-ekwu otú ahụ site n'iche echiche udo na mkpuchi blanket nke ikuku gbara ya gburugburu. Nnukwu mgbawa ikpeazụ nke ugwu Arenal mere na 1968 mmiri iyi ya dị ọkụ bụzi otu n’ime ebe ndị na-adọrọ mmasị na mpaghara ahụ, ya na ọdịdị mara mma ya na ihe omume dị egwu.
Ọtụtụ puku ihe egwuregwu na ọtụtụ adrenaline na Costa Rica
Na-ekwu maka egwuregwu dị egwu, ndị ukwu N'ime ogige ihe okike dị n'ime ala nke Arenal Volcano bụkwa alaeze nke akara zip na Costa Rica. Oke ohia nke Monteverde bu ebe kachasi nma ime ya.
N'aka nke ọzọ, mmiri ọcha bụ ihe ọzọ dị mkpa na njem dị na Costa Rica, ndagwurugwu Sarapiquí bụ paradaịs maka ịkwọ ụgbọ na ịnya ụgbọ nke nwere ebe obibi obibi mara mma. Ọ dị mma iji teta n'akụkụ anụmanụ na mpaghara.
Ọzọkwa, Costa Rica bụkwa ebe zuru oke maka ndị na-egwu mmiri.. A na-atụle ụsọ oké osimiri mba Pacific site na magazin Rouba's Scuba dị ka otu n'ime ebe ise kachasị mma maka mmiri mmiri dị elu maka akụ ya dị n'okpuru mmiri. Imirikiti ebe ndị a bụ nke ebe echedoro dị ka ama ama Cocos Island National Park, a na-ewerekwa ya Ebe Nleta Worldwa na "agwaetiti kachasị mma n'ụwa" dịka onye ama ama si France bụ Jacques Cousteau.
Ihe omimi nke pre-Hispanic nke Costa Rica
Na 2014 Unesco kwuputara nhazi nke narị narị ise petro -hehe ihe ntanetị ahụ dị n'ụsọ oké osimiri Pacific nke Costa Rica, na Diquís delta. Ekwenyere na e kere ha n'etiti 400 BC na ọchịchị ndị Hispanic nke Costa Rica.
A maara ha dị ka bọọlụ nke Costa Rica ma bụrụkwa ndị pụrụ iche n'ụwa maka ọnụ ọgụgụ ha, nha na izu okè. Achọpụtara imirikiti na South Pacific wee bụrụ ihe dị mkpa maka ọha mmadụ ndị a ka mmepụta ha gbasara ihe ruru otu puku afọ. Ekwuru na ha bu foduru Atlantis ma obu oru ndi ala ozo. Amara na esere ha na okwute mana amaghi etu ha si di, ebe ha dikwa ihe ruru ton 25.
Mara San José
Omenala, akụ na ụba na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Costa Rica dị na San José. Isi obodo ahụ nwere ọtụtụ ebe mmasị maka ndị ọbịa inyocha. Otu n'ime saịtị ndị nnọchi anya bụ National Museum of Costa Rica, Pre-Columbian Gold Museum, Metropolitan Katidral nke San José na National Theater.
Obi abụọ adịghị ya, ọ bara uru ịnọ ụbọchị ole na ole na San José iji mata obodo ndị mepere emepe, ụlọ nri ya ndị a nụchara anụcha, ndụ abalị ya na nka n'okporo ámá ya.
Ogige Ugwu La Amistad
La Amistad International Park bụ ogige ntụrụndụ kasị ibu na Costa Rica banyere hectare 200.000, nke kacha dịpụrụ adịpụ na ikekwe otu n’ime amaala ama. Ọ bụ gọọmentị nke Costa Rica na Panama mepụtara ya na 1982, nke na-akọwa aha La Amistad.
Nnukwu ọdịbendị ọdịbendị ya na ebe obibi ndị ọzọ pụrụ iche mere ka ọ kwe omume Emekwara ogige ahụ ebe nchekwa Biosphere na World Heritage Site.
Ọtụtụ ụdị dị egwu dịka jaguar bi na La Amistad Park tinyere ụdị nnụnụ ndị ọzọ, amphibians, na-akpụ akpụ na anụmanụ na-enye anụ. N'ezie, ụfọdụ n'ime ha biri naanị n'oké ọhịa a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Costa Rica » Costa Rica, paradaịs nkịtị iji chọpụta
Usoro Nazca, akụ dị na Peru
Ihe ikwesiri ime ka Camino de Santiago